Kutsvaga Pokugara : Sekuru's Stories Kutsvaga Pokugara : Sekuru's Stories
Saka vagara imomo, ndobva vatanga kuramba vachingofamba, vakasvikoona kuti kwave nemvura futi, ndobva vadzoka nekuno uku. Vamwe vainzi vaNgoni, vakanga vari muno umu, vakadzokera kuMalawi. Vari kugara kuMalawi iye zvino, ndokuna vaNgoni vakawanda, vamwe vachibva vadzoka kuno futi.
Saka vakanosvika kuSouth uko, vakasvikoona kuine mvura, ndobva vadzoka manje. Ndobva vauya vakurwisa vari kuno uku. Saka vakauya vava maDzviti. Vakadzoka vakurwisa vachitsvaga chii? Vava kuda kutora nzvimbo dzakanaka manje.
Saka ivovo vakauya vachinzi maDzviti. Vana vaMurenga, nokuti iye anonzi muNdebele chiaye chaiye muera Shiri. Saka zvikanzi anonzi Nyoni ndiye muDzviti chaiye. Vahungwe.
Asi zita iroro rekuti muDzviti harina kunaka kutaura kuna maNdebele. Rakaipa. Zvinoreva munhu asina kupfeka. Asina kupfeka, angove munhu chete. Vaiuya vasina kupfeka, vanhu vacho. Chavaipfeka chete chete, zvinonyadzisira kutaura. Zvinonyadzisa. Aingofamba ari munhu. Aifamba ari munhu. Ndosaka vaiti maDzviti. MaDzviti havapfeke.
Kana Banda, Banda akabva muno umu, vaitonga kuMalawi. NdovanaSibanda. Kuno uku kumaNdebele vanoti Sibanda, muno umu tinoti Shumba. Saka iyeye akabva ari Sibanda muno umu, ndobva aenda uko, nokuti vaiti vakasvika kuno uku, vodzokera kumashure.
Zvaiitika ndozvekuti, munhu ane mhuri yake otsvaga pokugara. Zvokuti, ndofunga mhuri dzakawanda dzakabva umomo, vamwe vakaenda kuBritain, vamwe vakaenda kuGermany, vamwe vakaenda kuAmerica, vamwewo vakasara umomo vaitsvaga nzvimbo dzakanaka dzokugara. “Ndikagara apa nemhuri yangu, ndava kutonga nyika yese ino ini.” Ndozvavaita izvozvo.